1. यो के हो? कहिले आउने मनसाय छैन निको हुन पहिले लामो समयको लागि आउँदैछ सायद क्रोधित, विचलित हुने र केही गर्न असमर्थ भएको बिन्दुमा। धेरै व्यक्तिले हिचकीको समस्या अनुभव गरेको हुनसक्दछ। त्यो कहिलेकाँही त्यस्तो समय आउँछ जुन जस्तो हुनु हुँदैन बैठकमा हुनु वा महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको बारेमा छलफल गर्दै वा घटना हो कि Kaiwa जन्म हुनेछ यसको बारेमा सोच्दा, यो निराश थियो, रिसाउँदै उसको मुटुमा। तर नडराऊ आज हामी हिचकीबाट कसरी छुटकारा पाउने भनेर जान्यौं। हामी तपाईंलाई चिन्ताबाट जोगिनका लागि भेला भएका छौं जब यो लक्षण फिर्ता हुन्छ
2. तपाइँको हिचकीबाट कसरी छुटकारा पाउने भनेर थाहा पाउनु अघि हिचकीका कारणहरूबारे जान्नुहोस्। त्यहाँ कारण हुनुपर्दछ। जो कोही गर्छ कि सम्भवतः हेरचाह गर्न र यो कष्टकर लक्षणलाई रोक्न सक्षम छ? हिचकी छातीको गुहा र पेटको बिचमा रहेको डायाफ्राम मांसपेशियोंमा अचानक संकुचनको स्थितिबाट हुन्छ। संकुचन को कारण द्रुत इनहेलेसनमा परिणामहरू तर उही समयमा, आगमन एयर भोकल डोरीले समात्न थाल्छ जुन अचानक बन्द हुन्छ। Laryngeal मांसपेशीहरूको संकुचनबाट हिचकी ध्वनी पैदा गर्दै जुन हामीलाई निराश बनाउँछ यो छोटो अवधिमा देखा पर्न सक्छ र त्यसपछि हराउनेछ, वा केहि केसहरूमा 48 48 घण्टा भन्दा बढि।शिक्य अत्यधिक धुम्रपानबाट हुन सक्छ। धेरै पिउने खाना छिटो खान्नुहोस्, यसलाई राम्ररी नचुक्नुहोस् वा मसलादार, पेट फूल्नुहोस्। यो उत्साहित मुड वा तापमानमा तीव्र परिवर्तनको कारणले गर्दा शरीर अचानक समायोजित हुन सक्छ।
3. हिचकीबाट छुटकारा पाउनका लागि ways तरिकाहरू र शरीरलाई असर गर्दैन जो अक्सर हिचकी गर्दछ को लागी आज हामी एक सुरक्षित र सजिलो तरीका फेला पार्दछौं। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले शरीरलाई एक अर्को छोड्ने प्रभाव पार्दैन।
4. धेरै चिसो पानीको एक चुस्की लिनुहोस् वा चिसो पानीले गार्गल गर्नुहोस्। यसले ठूलो कपको चिसो पानी पिई तपाईलाई सास फेर्न अनुमति दिनेछ, र पानीले तपाईको सास रोक्ने मांसपेशीलाई पनि मद्दत पुर्‍याउँछ र आराम गर्दछ, तर बिस्तारै पिएपछि र आराम गरेर तपाईको सास समात्नुहुन्छ। राती अबेर सम्म निसाउनबाट जोगिन।
5. तपाईको सासलाई छोटो समयावधिको लागि १० सम्म गणना गर्नुहोस्। यो पहिलो विधिसँग मिल्दोजुल्दो छ। मेरो सास समातेर हामी अझ पूर्ण रूपमा सास लिन सक्षम हुनेछौं। लेट रातीको लक्षणबाट राहत पाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।
6. अधिक खट्टा, मीठा खानाहरू जस्तै निम्बूका स्लाइसहरू वा चिनी घनहरू खाउनुहोस्। यो तपाईंको इन्द्रियलाई जागा रहन मद्दत गर्ने अर्को तरिका हो। खानाको स्वादबाट कुनै क्षति को कारण बिना
7. आघातको कारण मित्रलाई आमन्त्रित गर्नुहोस् जब स्तब्ध पार्ने हुन्छ, शरीरले छिटो सास लिन्छ। र मांसपेशिहरु द्रुत चौंकाइबाट तन्काउँछन्
8. स्निफिंग वा छींकको लक्षणको कारण यसले हामीलाई गहिरो सास फेर्न अनुमति दिन्छ र छींक गर्दा डायाफ्राम र वाइन्डपाइपका मांसपेशीहरू व्यायाम गर्न मद्दत गर्दछ।
9. यदि माथि उल्लेखित चरणहरू अझै पनि हराए भने र h 48 घण्टा भन्दा बढि समयसम्म हिचकीलाई निरन्तरता दिन खोज्नको लागि औषधी र उपचारका लागि डाक्टरलाई भेट्नु पर्ने हुन्छ मैले भनें, हरेक लक्षण यसको मूल हो। र धेरै लामो हिचकीको रूपमा रहँदै, शरीर जस्तो, केहि चेतावनी संकेतहरू पठाउँदछ कि हामी निश्चित रूपमा सुरक्षित हुन जाँच गर्नुपर्दछ।